Kungani amaNtaliyane adla i-macaroni
Wake wake wazibuza ukuthi kungani amaNtaliyane adla i-macaroni? Sonke siyazi ukuthi abaseYurophu bayaqapha impilo yabo futhi ngeke badle imikhiqizo eyingozi. Ngakho-ke, singasho ngokuphepha ukuthi umkhiqizo we "pasta" wekhwalithi uyasiza kakhulu.
Igama eliyiqiniso le-macaroni pasta ekuhumusheni kusukela ku-Italian lisho "inhlama". I-recipe ye-classic yokukhiqizwa kwayo yezimboni ilula. Kusukela kufulawa wekolweni ngamanzi, uxoke inhlama, bese udlula umshini okhethekile owenza umumo, ukusika futhi umile. Igama elithi Maccheroni likhona nasesichasini samaNtaliyane. Ngokuvamile babiza leli bhubhu elide lomhlama owomile ngegodi ngaphakathi.
Kuye ngekhwalithi kanye nebanga lofulawa, i-pasta ihlukaniswe ngamaqembu namakilasi. Iqembu A lihlanganisa imikhiqizo evela kufulawa wezinkolo eziqinile. I-Macaroni yeqembu A ayibilisiwe kakhulu futhi inezinto eziningana eziwusizo, esizoxoxa ngezansi. Iqembu B - macaroni kusuka ku-vitreous ukolweni. Futhi kumikhiqizo yeqembu Ivela kufulawa ovamile webhaleji, ongabizi, kepha awunakulungele nokwenza i-pasta. E-Italy, ezweni lakubo, ngokuvamile kuvinjelwe ukusebenzisa ufulawa olunjalo ukuze kukhululwe lo mkhiqizo. Ngamakilasi, konke kulula. Eyokuqala kungokwakhe imikhiqizo evela kufulawa wezinga eliphakeme kakhulu, kuya kwesibili - kusuka kufulawa weyokuqala.
Ngokuqondene namaqanda amaqanda, amaNtaliyane ayibheka njengento ehlukahlukene. Mhlawumbe lokhu kulungile. Inhlama yengezwa i-egg powder, okwenza kube ukunambitheka okuyingqayizivele. Futhi ama-noodle asheshayo, hhayi ekwakheni noma kwezobuchwepheshe bokukhiqiza, ahluke ku-pasta evamile. I-nuance kuphela yukuthi ngaphambi kokupakisha kusetshenzwa ngomoya oshisayo. Ngenxa yalokhu, lipheka emaminithini ambalwa nje. E-Italy, kunezinhlobo ezingaphezu kuka-300 ze-pasta. Ezitolo zethu, "izinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo" zilula kakhulu - ezimbalwa. Emhlabeni wonke, i-spaghetti (spago) isiye ethandwa kakhulu. Futhi kithi kukhona i-macaroni ehamba phambili kakhulu - emifushane nezimpondo.
Macaroni - umkhiqizo ulula. Ngakho-ke, uma umkhiqizi efuna ukuthengisa izimpahla zakhe ngentengo ephakeme kunokulinganisa, udinga okuthile okumangala umthengi. Uhlobo lwe-pasta enemibala, elulungiswa nge-adde yemifino yemifino yemvelo. I-pasta ebomvu - ne izaqathe, ipepti - ne-beet, eluhlaza - nge isipinashi. Babheka ngendlela engavamile epuleti, njengezingane futhi bafanelekile ama saladi. Unyaka ngonyaka ukuthengiswa kule makethe kuyaba kancane. Kodwa i-pasta yangempela yase-Italy isengathengwa ezitolo zethu. Nakuba kunenani eliphindwe kabili noma ngaphezulu kunenani lentengo ye-pasta yasekhaya.
Kubhekwa ukuthi kusukela macaroni uthole fat. Lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Ngokwesibonelo, umlingisi odumile wase-Italy uSophia Loren wakhonta i-pasta yonke impilo yakhe futhi wayevame ukuwapheka nge-sauces ezihlukahlukene. Futhi u-Anna Magnani owayengumdlali owaziwa phansi kakhulu njalo kusihlwa wadla ukukhishwa kwe-spaghetti futhi ngesikhathi esisodwa wahlala encane. Izindlovu zaseNtaliyane zithi ukuthi ukugcina isimo esihle, udle ipuleti yokunamathisela "okungenalutho" kabili ngesonto. Ngokuvamile, i-pasta ayiyingozi kulesi sibalo, uma ingasetshenziswanga kabi. Ku-100 amagremu womkhiqizo owomile uqukethe ama-kilocalories angaba ngu-350, nasesidlweni esilungisiwe - kancane kancane kathathu. Vumelana, hhayi kakhulu. Into esemqoka akuyona ukuhlanganisa i-pasta namafutha. Ngaphandle kokulimaza okhalweni, imifino ingafakwa kwi-pasta ngaphandle kwamafutha, nge-sauce elula, njengesibonelo soy. Futhi nansi uhlobo oluvamile lwesiRussia - ama-noodle ane-ushizi ne-bhotela-indlela eqondile yokunciphisa umzimba.
Ukhula oluvela ngesikolweni se-durum, olusuka kuso i-pasta ye-classic, lucebile kumavithamini weqembu. Futhi ku-pasta kunenani elikhulu kakhulu le-vitamin F. I-Quality pasta iqukethe i-fibre, enikeza umuzwa omude wokuphuza umzimba futhi ususe amakhemikhali emzimbeni.
Indlela amaNtaliyane adla ngayo i-Pasta
• ama-Italian awapheki ama-pasta njengalokhu senza - kuze kufike umbuso oqinile obizwa ngokuthi i-al dente. Landela isibonelo sabo - mhlawumbe uzoyithanda.
• E-Italy, bavame ukuhlanganisa i-pasta nezinhlanzi. Nakuba ngandlela-thile sicabanga ukuthi le mikhiqizo ayihambisani kakhulu.
• Isikhathi esisha emfashini kufaka ama saladi asekelwe pasta. Bafaka pepper elimnandi, i-broccoli, amakhowe, ama-olivini, i-garlic, utamatisi we-cherry kanye nenkathi ngamafutha omnqumo, uviniga obhalsamu kanye namakhambi ase-Italy.
• I-Macaroni ingalala emakamelweni ngaphandle kokwehlisa ukunambitheka iminyaka. Nokho, ngesitoreji eside, zilahlekelwa izakhiwo eziwusizo.
Abesifazane abathandekayo babheka isibalo sabo. Phendula lo mbuzo: "Kungani ama-Italiya angenawo pasta, kodwa asikwazi?". Khumbula, i-pasta ephakeme kakhulu ayigcwele. Ngaphezu kwalokho, ziyisiphuzo esihle futhi ziqukethe izinto eziwusizo. Bon appetit!
Abanambitheki nabathandekayo - balimaze noma bazuze
Ukudla kuyinto enengqondo futhi elinganiselayo.
Ikhukhamba: izakhiwo eziwusizo
Uhlelo lokunikezwa kwamandla kaGalina Shatalova
Izimpawu kanye nokudla okunempilo nge-diarrhea
Yini ewusizo ushizi?
Izakhiwo eziwusizo ze-semolina porridge
Ama-postcard amahle kunazo zonke anesithethelelo ngeSonto, ngo-2018: ngokubhaliswa, ukubonga, izinkondlo
Indlela yokuvikela ingane emakhazeni: amaphutha ayisisekelo abantu abadala
Ingabe kufanelekile ukuxhumana nomuntu olahlekile ekuphileni?
Indlela yokwenza i-hairstyle kusihlwa
Indlela yokukhetha ukulala okulungile
Amasks nama-broths for izinwele ezivela enambuzane
Indlela yokuphumula eCairo
I-pizza enenkukhu ihlanjululwa nge-sauce enezinambuzane ezivundiwe
Amakhowe asetshenziselwa ukhilimu
Ukuzalwa ngokwemvelo emva kokuhlinzwa ngesikhathi sokukhulelwa
Ungenza kanjani ukulungiswa egumbini lezingane?
Isobho nge cherries kanye namadombolo
Amabhontshisi amakhowe anamakhowe
I-Puree esuka ku-broccoli
Ngingakhetha ukuthi kufanele ngibelethe kanjani?
Ukuthuthukiswa kwengqondo yengane esemncane
Ngesaba njalo abathandekayo bami, yini engingayenza?